२ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार, यस्तो छ योजना ! – सुनाखरी न्युज
२ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार, यस्तो छ योजना !
Posted on: October 12, 2020 - 5:07 pm
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ । आन्तरिक ऋणमध्ये हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ भने ३ अर्ब रुपैयाँ मंगलबार उठाउँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले ३० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋण पत्रमार्फत र ३ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी विलमार्फत ऋण उठाएको छ ।
पहिलो चौमासिकमा उठ्नु पर्ने आन्तरिक ऋण एक महिनाभित्र उठाइनसक्ने प्रवक्ता भट्टले बताए । दोस्रो चौमासिकमा ५६ अर्ब र तेस्रो चौमासमा १ खर्ब १२ अर्ब गरी कुल २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसक्ने राष्ट्र बैंकको तालिका छ ।
सरकारले गत आव २०७६-०७७ मा १ खर‍्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । कुल आन्तरिक ऋणमध्ये ४६।१५ प्रतिशत ट्रेजरी बिलबाट, ५१.२८ प्रतिशत विकास ऋणपत्रबाट, २।०५ प्रतिशत नागरिक बचत पत्रमार्फत र बाँकी ०.५१ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमार्फत उठाइएको थियो ।